Ubuntu inogadzirira kutengesa hembe nezvipfuyo zvavo | Linux Vakapindwa muropa
Kare kare, Canonical yaive nechitoro kwayakatengesa zvigadzirwa zvine chekuita nesisitimu yayo yekushandisa. Muchitoro ichocho taigona kutenga, semuenzaniso, CD rekutanga re Ubuntu, asi yanga yave nguva yakareba kubva vazvivhara. Kubva pane zvandinoziva, ndigadzirise kana ndakanganisa, panga pasina mukana wekutenga chero chinhu chepamhepo online kubva ipapo, asi zvinoita sekunge izvo zvichachinja munguva pfupi uye, padiki, tinogona kutenga hembe senge dzaunoona dzichitungamira chinyorwa ichi.
Pari zvino, iyo chete ruzivo irworwo ndeye iyo tweet kubva kune yepamutemo Ubuntu account iyo inotitora isu kuenda kuAmazon USA, kwatinogona kuona matatu mafoto eimwe hembe ine logo Fossa Focal kumberi uye zita rehurongwa hwekushandisa kumashure. Chinhu chakashata ndechekuti panguva yekunyora iyi mitsara haigone kuchengetedzwa kana kuzivikanwa mutengo iwo iwo wauchange uchiwanikwa.
Munguva pfupi inotevera tichakwanisa kutenga yepamutemo Ubuntu mashati paAmazon
News 🎉 Nhau dzakanaka dzeshamwari dzedu dzese muUS! Tiri munzira yekuita kuti vamwe vatengesi vedu vatengeke @amazon, kutanga neanozivikanwa 20.04 kuburitsa focal fossa T-shirts ry Kurumidza utore yako! #linux #open source #devops #gorehttps://t.co/zEMuoIEePp
- Ubuntu (@ubuntu) July 19, 2021
Nhau dzakanaka kuvose vedu shamwari muUS! Tiri mubishi rekugadzira zvimwe zvezvigadzirwa zvedu kuti zviitwe pa @amazon, kutanga neFocal Fossa 20.04 inozivikanwa kuvhura t-shirts. Kurumidza uye tora yako! #linux #opensource #devops #cloud
Tichitarisa iro ruzivo rwuri muchinyorwa, tinoona kuti pazasi zvinoita sekunge zviripo kubva munaKurume, asi ini ndinopokana kuti ichokwadi. Kutsvaga pa Twitter, inotaura kuti paive mahembe pa2020 Kubecon akabudirira kwazvo, uye ndosaka Ubuntu (Canonical) yafunga kutengesa iwo iwo mashati kuAmazon.
Kana iwe uchifarira, iyi link yekutenga mahembe iri izvi. Kunyangwe ichiti ndeyevaAmerica, chinyorwa "Dhirivira kuSpain" chinoratidzika kwandiri, izvo zvinofanirwa kureva kuti ichatumirwawo kuEurope. Pasina rumwe ruzivo, hatigone kuvimbisa kuti haufanire kubhadhara mari yakawanda yekutumira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Ubuntu inogadzirira kutengesa hembe nezvipfuyo zvavo, kutanga neFocal Fossa
chikuru ini ndichamirira kuti ndiite chimwe chinhu
Kana vakavatengesa kuAmazon, ndipo pandisingavatenge, ndinopesana zvachose neAmazon, nekuti Amazon iri kuuraya zvese, nekuda kweAmazon kune mashoma uye mashoma mabhizinesi. Ini ndinotenga kubva kuAmazon kana ndisina sarudzo, ndinotora mota ndoenda kudare reChirungu kana mediamarkt ndonoona chigadzirwa panyama sezvave zviri hupenyu hwangu hwese, Amazon iri kuparadza nyika dzese uye vanhu havatozviziva, Kubva kuAmazon nharaunda yangu yaive izere nezvitoro zvemarudzi ese, ini handina kana kutora mota kuti nditenge zvese zvese, ikozvino ini ndinofanira kutora mota kana nemabhora ndinofanira kubvunza Amazon nekuti handisi kuiwana chero kupi. Kunze kwekuti hazvina musoro kutenga hembe yeimwe vhezheni yechero distro, zvekuti gare gare inokanganikwa, ndinoona zvirinani kutenga mahembe neDistros marogo, izvo zvine musoro, zvinosuruvarisa zvikuru kuti hapana chakaderera pane canonical inofanirwa kuenda kuAmazon yakaora, pachinzvimbo chekuzviitira ivo pachavo.
Pindura kuna AmazoNO